ခ်စ္ၾကည္ေအး: June 2021
ချစ်ခြင်းတရားနှင့် နှောင်ကြိုးများနှင့် ခွဲခွာရခြင်းမျာ$း
စမှတ်ရှိရင် ဆုံးမှတ်ရှိသလို အသစ်တဖန်ပြန်အစတွေလည်း ရှိနေတယ်ဟုတ်လား...။
ဒီနေ့ ၂၉ဟာ ကိုရေမွန်ဆုံးပါးသွားတာ တပတ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့။ သူ ရှိနေစဉ်က သူ့သီချင်းတွေ အမြဲနားမထောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ သူ့bandရဲ့ youtube channelကိုတောင် subscribe မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ my listအနေနဲ့ favထဲသိမ်းထားပြီး နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။ သူဆုံးသြားမွပဲ သူ့ကို လူတွေဘယ်လောက်ချစ်ကြမှန်း ပိုသိကြရတယ်။
ဘယ်သူမွ အတိအကျပုံဖော်လို့ မဖြစ်နိူင်ဘူး
သိပ်လှပတာမို့ အလုံးစုံဖော်ပြဖို့ရာ မတတ်နိူင်ကြဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က ကျွန်မမိတ်ဆွေရဲ့ခင်ပွန်း ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ သူ့ကို မီးသင်္ဂြိုလ်မယ့်နေ့မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ကို အိမ်မှာပဲထားခဲ့ဖို့ ကျွန်မမိတ်ဆွေက ဆုံးဖြတ်တယ်။ သူ့အမျိုးသားဆုံးတာ ဆေးရုံမှာဆိုတော့ ဆေးရုံကနေပဲ သင်းချိုင်းကို တန်းပို့မှာမို့ သူ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို အဖေဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကို ပေးမတွေ့တော့ဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀ကျော် အဖေဆုံးတုန်းက နိူင်ငံရပ်ခြားမှာမို့ အဲဒီမြာပဲ သင်္ဂြိုလ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အဖေ့အလောင်းကို မြန်မာပြည် ပြန်မသယ်ယူခဲ့ဘူး။ အဖေတို့ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတွေက အေဖ့ကို အလောင်းပြင်ထားပုံတွေ၊ မီးသင်္ဂြိုလ်ကာနီးပုံတွေ၊ အားလုံးပြီးသွားတော့ ဆုတောင်းပေးပုံတွေ ဓါတ်ပုံတွေကို ကျွန်မတို့မိသားစုဆီ လှမ်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ပုံတွေကို ကျွန်မ ခုထိ လုံးဝမကြည့်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်မမျက်လုံးထဲကနေ စိတ်အတွင်းသားထဲအထိ စွဲကျန်နေရစ်မယ့် အဖေသေဆုံးပြီဆိုတာ သေချာစေတဲ့ရုပ်ပုံတွေကို ကျွန်မ မှတ်မိမနေချင်ဘူး။
ခုလည်း ကိုရေမွန်ကို ချစ်တဲ့ အရင်းနှီးဆုံးတွေက သေဆုံးတဲ့ပုံတွေကို မမျှဝေချင်ဘူး၊ အသိစိတ္က လက်ခံလိုက်ရလည်းပဲ သူဆုံးသွားပြီဆိုတာကို မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ပုံရိပ်တွေအဖြစ် သိမ်းမထားချင်ဘူး။ သူရှင်သန်စဉ်က ပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေ၊ သူ အနားရှိစဉ်က ကြုံတွေ့ရသမျှတွေကိုပဲ ပုံရိပ်ရှင်တွေအဖြစ်သာ သိမ်းဆည်းလိုတယ်။
သူပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို သူပြန်ရရှိခဲ့တာ...။
ကျွန်မလည်း အတူတူပါပဲ။ အတ္တကြီးတယ်ပဲဆိုဆို ချစ်သောသူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်မတို့က ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ကိုသာ အလိုရှိတာ၊ မှတ်မိနေချင်တာဟုတ်လား...
လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုသာ အရင်ဆုံး ပြေးမြင်ချင်တယ်။ နာစရာတွေ မတွေးချင်ဘူး၊ ကျွန်မနဲ့အတူ ခုထိ သယ်ဆောင်မလာချင်ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်မအကြောင်းလို့ တွေးမိရင်လည်း ချစ်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်လို့သာ တွဲမြင်စေလိုတယ်။ လွမ်းဆွတ်မိရင်တောင် အပြုံးလဲ့လဲ့မျက်နှာပေါ်တင်လို့ တစိမ့်စိမ့် လွမ်း တ နေချင်တာ။ ကောင်းခဲ့ခြင်းတွေကိုသာ သတိရခြင်းနဲ့အတူ မှတ်ဉာဏ်ထဲ သိမ်းချင်တာ။ အမုန်းတရားဟာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်။ ချစ်ခြင်းတရားဟာလည်း မသုံးတတ်ရင် လောင်မြိုက်စေပြန်တာ...။
ဘဝဆိုတာက တိုတောင်းလွန်းသလို မနက်ဖြန်ဆိုတာကို ဘယ်သူမွ ကြိုတင်မတွက်ဆနိူင်ဘူးဟုတ်လား။ သေခြင်းတရားဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်နှာမလိုက်ဘူး။ အချိန်စေ့ရင် သေကွဲကွဲရမယ် အားလုံးကိုထားခဲ့ရမယ်။ ဒါ ဘဝပဲ။
ကျွန်မ သြားရတဲ့အခါ ကျွန်မအတွက် မျက်ရည်မကျစေချင်ဘူး။ ရှင်သန်စဉ်မှာ ကျွန်မထားရှိခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို အမှတ်ရရင်း ပြုံးနေစေချင်တာ။
ပြီးတော့ အသစ်တဖန် ပြန်စခြင်း...
ကိုရေမွန်က အသစ်တဖန် ပြန်စဖို့ ခရီးထြြက်သားခဲ့တာ...
တကယ်ဆို လုံလောက်ခိုင်ခံ့သော ခံနိူင်ရည်စွမ်းရှိမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ ရပ်ဝန်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့သင့်တာ...
ကျန်ရစ်ခဲ့နိူင်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားခဲ့သင့်တာပေါ့။ ဖြတ်သန်းမှှုတခုရဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းကာလကို ရှည်နိူင်သမျှ ရှည်ကြာချင်ခဲ့တာတခုတည်းပါပဲ၊ မလဲွမသွေ ကျော်လွန် ဖြတ်သန်းသွားမှာကတော့ သေချာတယ်လေ။ မရောက်ခင်နဲ့ ကျောခိုင်းပြီးကာလအကြားက ဆုံဆည်းခြင်းဟာ ဖျတ်ကနဲ။ ခေါက်ရိုးကျိုးသံသရာထဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းတွေက ထိပ်ဆုံးမှာ အမြဲရှိနေကျ...။ ချစ်ခြင်းတရားမှာ မကျန်ရစ်ခဲ့ဖူးသူ ဘယ်သူ ရှိပါ့မလဲ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ပြိုလဲခဲ့တဲ့ကာလဟာ ငရဲခန်းဘယ်နှစ်ခုစာ တာရှည်ခဲ့ပါလိမ့်။ မတွေးချင်ဘူး။
ခုေတလာ စိတ်တွေ နာကျင်ရခြင်းအကြောင်းတရားတွေ များသားပဲ။ တရေးနိူးမှာတောင် ဒီစစ်အာဏာရူးတွေ မကျဆုံးသေးဘူးလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အနက်ရောင်တွေ ဆန်နေလိုက်ပုံက။ အမုန်းတရားတွေ ပိန်းထနေတဲ့ နေ့စဉ်ထဲ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို မနည်းဒယဥ့်တိုက်ဆွဲငင်နေရတာ။ အသက်ဝဝ မရှူနိူင်တဲ့နေ့တွေသာ ပန်းခြောက်တွေဆို တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေစေချင်လှပါပြီ။
တော်လှန်ရေးမှာ ချစ်ခြင်းတရား မပါဝင်ဘူး ထင်ခဲ့တယ်။
တကယ်က ချစ်ခြင်းတရားတခုထဲကြောင့်သာ ပုန်ကန်ကြရတယ်။ ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တို့ချစ်တယ်။ ကိုယ်တို့လူငယ်တွေကို ကိုယ်တို့ချစ်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က မြေနံ့ကလေးကို ကိုယ်တို့ချစ်တယ်။ ကိုယ့်မြေပေါ်က သစ်ရွက်ခြောက်ကလေးတွေကအစ ကိုယ်တို့ချစ်တယ်။ ဒီရေဒီမြေကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ကိုယ်တို့ တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ တကိုယ်စာချစ်ခြင်းတရားထက် ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တို႔ ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မတရားမှှုကို တော်လှန်ခဲ့ကြတာ။
အဆုံးသတ်တော့မှာ၊ အဆုံးသတ်တော့မှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့၊ တနေ့ချင်းစီကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ပုံမျိုးနဲ့ ဖြတ်ကျော်တယ်။ ငါတို့နိူင်မှာဆိုတဲ့ သေချာမှှုဟာ အကောင်းဆုံးစိတ်ခွန်အားပဲ။
ချစ်သူ မုန်းသူ ဘယ်လိုမှ ဖီးလ်မလာသူ၊ မခွဲခြားဘူး။ တော်လှန်ရေးမှာ တရားတဲ့ဘက်ကရပ်သူနဲ့ မတရားမှှုကို အားပေးသူ ဒီနှစ်မျိုးပဲ ရှိတော့တယ်။ ကိုယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နှောင်ကြိုးတွေ အပြီးဖြတ်ချရမယ့် ဒီပဲွမှာ မျက်စိစုံမှိတ်လို့ တိကနဲဖြတ်ချခဲ့ရတာတွေ များသားပဲ။
ချစ်ခြင်းတရားမှာ ရိုးသားမှှုရှိမှ အဲသလိုပဲ နိူင်ငံ့အရေးမှာလည်း ရိုးသားမှ ချည်နှောင်လို့ရမယ့် တွဲလက်တွေ အချင်းချင်းဖေးကူကြရတာ ကိုယ်တို့ရလိုက်တဲ့ အမြတ်ပဲ။ ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းသလဲ။ ဒီစိတ်နဲ့ ရှေ့ဆက်မယ်ဆို အားလုံးမျှော်လင့်တဲ့ ကမ်ဘာသစ်ဆီ ကိုယ်တို့အရောက်သွားနိူင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ တယောက်အပေါ်တယောက် ညီညွတ်မျှတတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ကိုယ်စီ လျှောက်ကြမယ်။ အားလုံးပါဝင်မှ တွင်မယ့်ခရီးမှာ လားရာမတူသူတွေကို ဖြုတ်ချခဲ့လိုက်ကြစို့.။
တကိုယ်စာချစ်ခြင်းထက် လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ချစ်ခြင်းတွေကသာ ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှှုအတွက် အဖြေဖြစ်တယ်...
လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးခက်ဆိုတဲ့စကားက ခုမှ သက်ဝင်လာသလိုရှိတယ်။ ဝမ်းရေးမဟုတ်ပေမယ့် နိူင်ငံ့အရေး၊ ပိုပြီးတော့တောင် အရေးကြီးတဲ့ နိူင်ငံ့အရေးပေါ့။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်ကစလို့ ကျွန်မတို့ဘဝတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာ။
အားလုံးပါဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ နိူင်ငံ့အရေးမှာ ကျွန်မလည်း အတူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကိုဗစ်ကြောင့် အဆုံးအရှုံးများခဲ့ကြရသလို ခုလည်း အဆုံးအရှုံးတွေ နာကျင်မှှုတွေအများကြီးနဲ့ ကျွန်မတို့အားလုံး မပျော်ကြတော့ဘူး။ ကျွန်မတို့မြို့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ လူငယ်ကလေးတွေရဲ့ သွေးတွေနဲ့ ရဲရဲနီလို့။ မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားတွေ ကွဲကြေလို့။
ဝမ်းနည်း နာကျင်လိုက်၊ ပျော်လိုက် အားတက်လိုက်၊ စိတ်ဓါတ်တွေကျလိုက်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ကာလဟာ ရှိရင်းအချိန်ထက် ပိုကြာနေတာတော့အမှန်ပဲ။ အားလုံးဟာ အောင်စိတ်တွေနဲ့၊ နိူင်ကိုနိူင်မှာဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ အခုထိ တယောက်စိတ်ကို တယောက်က ဖြည့်တင်းရင်း တော်လှန်ရေးအလံတော်ထိပ်ဟာ ကျွန်မတို့ဆုံမှတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အတူတကွဖြစ်တယ်၊ ကျရာနေရာတွေမှာလည်း ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ တယောက်ချင်းစီတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တဲ့ နှောင်ကြိုးတွေနဲ့ အိမ်ထဲကနေ ကျွန်မတို့ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း နှောင်ကြိုးတွေကို ဖြတ်ထားပစ်ခဲ့ပြီ။ ခုချိန်မှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးလောက် ဘာကမှ အရေးမကြီးတော့ဘူး။
မျက်ဝန်းတွေ မှိတ်လိုက်ချိန်တိုင်းမှာတော့ ခပ်ရေးရေးမြင်ယောင်ဆဲ၊ ဘယ်တော့မှ မလျှောက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ လမ်း။
ခုတော့လည်း အဲဒီအရူးဟာ ကျွန်မပါလို့ ယုံကြည်ရမှာတောင် ခဲယဉ်းသားပဲ။ သံယောဇဉ်မထားတတ်တဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ် မာရေကျောရေမိန်းမတယောက်ဟာ ချစ်ခြင်းတရားမှာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပျော်ဝင်နေမိခဲ့။ အဲတာ ကျွန်မလား။
တော်လှန်ရေးထဲမှာ စိတ်တွေဟာ မာကြောလွန်းတော့ ကျိုးပဲ့လွယ်တာမို့ ချစ်ခြင်းတရားကို သတိရချိန်တွေ ပေးဖြစ်တဲ့အခါလည်း ရှိတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်ချစ်ခဲ့ရတာလဲ သိလား။ သေချာပါတယ်၊ အခု ကျွန်မ ပြောလိုက်လို့ ကြားရပေမယ့်...၊
ရှင် တကယ် မသိသေးဘူး...။
ချစ်ခြင်းတရားရဲ့အတိမ်အနက်ကို ချစ်ရသူကသာ သိတာ၊ တကယ္သိတာ။ ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့် လူသားတဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချစ်ခြင်းတရားကို ကျွန်မ သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ဆက်စပ်ရာတွေကတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အနည်းငယ် ခါးသည်း၊ တော်တော်လေး နာကျင်စရာတွေ။
မောင်ရေလို့ ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်နေခဲ့တယ်။
ကျွန်မအသံတွေ ပျောက်သွားတဲ့အထိ။ မခေါ်နိူင်တော့လောက်အောင် အသံတွေ အက်ရှ လက်ပန်းကျသွားတဲ့အထိပေါ့။ လပြည့်ညတွေကို မော့မကြည့်ရဲတော့တဲ့ အထိပေါ့။
မောင့်မိန်းကလေးက ကျွန်မနဲ့ တူတယ်၊
မိန်းကလေးက ကျွန်မလို ဆံပင်တွေကို ဘေးတဘက်သိမ်းပြီး တခြမ်းစောင်း ချည်နှောင်ထားတတ်တယ်။ ကျွန်မလို ရင်ဖုံးအကျၤ ီလက်ပြတ်တွေ ဝတ်တတ်တယ်တဲ့။
မိန်းကလေးဟာ ကျွန်မ မဟုတ်ဘူး။
အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်မက ကျွန်မနည်းနဲ့ကျွန်မ မောင့်ကိုချစ်ခဲ့တာ။
ဖတ်လက်စ စာတအုပ်ထဲက စာသားတွေ ကျွန်မစိတ်ထဲ စီးဝင်လာခဲ့တယ်။
ကလေးတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့မိခင်က လက်ရှိကလေးတယောက် ထပ်ဆုံးရှုံးသွားမလား စိုးစိတ်နဲ့ ကလေးရဲ့စက်ရုပ်သူငယ်ချင်း AFကို ကလေးနဲ့တပုံစံထဲတူအောင် တုပပြီး (ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့)ကလေးကို လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အခါ အစားထိုးချစ်ဖို့ စီမံထားတဲ့ဇာတ်လမ်း။
မိခင်က ကလေးရဲ့စက်ရုပ်သူငယ်ချင်း AFကို မေးတယ်။
ငါ့သမီး Josieနဲ့ အပြုအမူတွေ အားလုံး တူအောင် လိုက်လုပ်နိူင်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ငါ့သမီးလို နှလုံးသားမျိုး၊ စိတ်နှလုံးမျိုး ရှိဖို့တော့ မင်း တူအောင် လိုက်တုနိူင်ပါ့မလားတဲ့...။
Do you believe in the human heart ?
I don't mean simply the organ, obviously. Im speaking in the poetic sense. The human heart. Do you think there is suchathing ? Something that makes each of us special and individual? And if we just suppose that there is. Then don't you think, in order to truly learn Josie, youd have to learn not to just her mannerisms but what's deeply inside her ? Wouldn't you have to learn her heart ?
ဒီလိုပါပဲ၊ ကျွန်မတို့ ဘဝတွေက တယောက်ချင်းစီတွေ၊
တော်လှန်ရေးကာလဟာလည်း ဘယ်လောက်ကြာဦးမယ် ဘယ်သူမှ မသိနိူင်ဘူး။ မနက်ဆို တော်လှန်ရေးကာလဆိုတဲ့အသိနဲ့နိူးပြီး ညဆို မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အိပ်တယ်။
ချစ်ခြင်းတရားဆီကို ပြန်ရောက်ဖို့တော့ ခက်လိမ့်ဦးမယ်....